Kajy ny tombotsoanao amin'ny fitantanana ny fanananao amin'ny kaonty fitokisana
Ny orinasam-pitantanana trano fandraisam-bahiny mazàna dia manolotra fonosana fitantanana isan-karazany ary mampifanaraka izany amin'ny zavatra takian'ny tompona tsirairay. Midika izany fa matetika dia misy fomba maro isan-karazany amin'ny fizarana ny vola miditra, ary ny tombom-barotra dia tokony isaina mifanaraka amin'izany. Ny kajy amin'ny faran'ny volana dia lasa lava be, mandreraka ary mora hadisoana.
Ankoatr'izay, matetika dia tsy azo atao ny mahita amin'ny fotoana tena izy ny fomba anaovan'ny trano iray, satria ny fanaovana izany dia mitaky kajy amin'ny antsipiriany hatrany. Mba hanasarotana kokoa ny raharaha, maro ny mpitantana fandraisam-bahiny dia mety manana fifangaroana fananana mitantana, JV (fiaraha-miombon'antoka miasa), ary fananana nohofana. Ny vola miditra amin'ireto tsirairay ireto dia tokony hampamoahina araka ny tokony ho izy, ary ny hetra sy ny fitandremana ny bokim-bola dia mety hiova na dia ho an'ny singa tsirairay ao anatin'ny trano iray aza.
Ny vokatra farany dia ny fitahirizana boky sy ny kaonty ho an'ny mpitantana ny hofan-trano fialan-tsasatra matetika dia lasa manahirana, tonga amin'ny vidiny lafo ary miteraka fifandirana eo amin'ny mpampiantrano sy ny tompona.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Accounting Accounting manampy?
Zeevou dia mamela anao hamaritra tsara hoe ahoana ny vola miditra sy ny fandaniana amin'ny famandrihana, ary koa ny fanampim-bola amidy, tokony hampisarahana amin'ny mpampiantrano sy ny mpampiasa vola (izay mety ho tompona / tompon-trano na olona nanofa trano iray fitantanana). Na singa fitantanana, fiaraha-miombon'antoka, na fizarazarana tombony amin'ny karazany hafa, azonao atao ny mamorona raikipohy manokana hilazana amin'ny rafitra mazava ny fomba tokony hanaovana kajy ny tombom-barotra ho an'ireo antoko.
Zeevou dia manohana faktiora ara-dalàna, ary koa faktiora ho an'ny proxy ho an'ny singa voatantana ary Toms faktiora ho an'ireo mpandraharaha monina any EU izay ao anatin'ny Scheme Margin an'ny mpikarakara. Rehefa mamorona mombamomba ny mpampiasa vola dia azon'ireo mpampiantrano atao ny mamaritra ny haavon'ny fidirana tokony hananan'ny mpampiasa vola (raha tokony hijery ny angona vahiny izy ireo na tsia) rehefa miditra amin'ny Tompon'ny Portal. Azonao atao ny mamorona fifampiraharahana ho an'ny mpampiasa mba hitaratra ny fifanarahana nataonao tamin'ny tompona trano, amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny mombamomba ny mpampiasa vola miaraka amina modely fifampiraharahana ary ny deatil amin'ny fandoavam-bola raikitra avy aminao amin'ny mpamatsy vola na ny fiampangana ny fitantanana isam-bolana izay mety nifanarahanareo. .
Ireo faktiora novokarin'i Zeevou dia mandray an-tanana ny fifampiraharahana ho an'ny mpampiasa vola mba hahafahany manatanteraka ny kaonty tokony hampiharana azy ireo, sy ny teti-ketra ampiasaina. Zeevou's integration amin'ny Xero mamela ny workflow mirindra miaraka amin'ny antsipirian'ny kaonty nosintonina ho an'ny sarintany ao anatin'ny Zeevou mankany amin'ireo singa / fananana isan-karazany, ary atosika hivoaka indray ireo faktiora.
Zeevou koa dia mamela ny mpampiantrano hanara-maso ny fandaniana - na miverimberina na iray heny, na fandaniana mifandraika amin'ny famandrihana toa ny vidin'ny fifanakalozana na ny saram-pivadihana vola. Ny fandaniana dia azo zaraina manontolo na ampahany amin'ny mpampiasa vola ihany koa. Ny fampahalalana manodidina ny fizarazaran'ny vola miditra sy ny fandaniana eo aminao sy ny mpamatsy vola anao dia raisina ao amin'ny tatitra momba ny tombom-barotra isam-bolana. Ity tatitra ity dia mikajiana ny pro-rata fidiram-bola sy ny fandaniana latsaka ao anatin'ny iray volana, ary aorian'ny fizarana ny vola marina aminao sy ny mpamatsy vola anao isaky ny fifampiraharahana ho an'ny mpampiasa vola dia manamboatra ny tombony ho anao tsirairay avy.
Ho an'ireo izay mitaky fivezivezena amin'ny fandoavam-bola, Zeevou dia mamela anao hamaritra isaky ny mpifaninana raha tianao ny vola hikoriana amin'ny bola fidirana na an'ny an'ny mpampiasa vola.